कुलमान घिसिङको का,र्यकाल थप्न प्र,धानमन्त्री ओली मानेनन्,के भन्नू हुन्छ तपाईं ? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
कुलमान घिसिङको का,र्यकाल थप्न प्र,धानमन्त्री ओली मानेनन्,के भन्नू हुन्छ तपाईं ?
काठमाडौं । नेपाल वि’द्युत प्रा’धिकरणका का’र्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको का’र्यकाल नथपिने नि’श्चितप्रायः भएको छ । प्र’धानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनलाई नि’रन्तरता दिने प’क्षमा नभएपछि का’र्यकाल नथपिने भएको हो ।
कुलमानको का’र्यकाल थप्न नेपाल क’म्युनिस्ट पा’र्टीका अ’ध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्र’चण्डले द’बाब दिइरहेका छन् । ऊ’र्जामन्त्री वर्षमान पुन प्र’चण्ड नि’कटकै भएकाले पनि उ’क्त म’न्त्रालयसम्बन्धी प्रा’धिकरणमा आफूले भनेको व्यक्तिमै नि’र्णय हुनुपर्ने पूर्व मा’ओवादी प’क्षधरको दा’बी रहेको छ । त्यसैले सम्भवतः भोलि बस्ने म’न्त्रिपरिषद्मा यसबारे प्र’स्ताव लाने तयारी भएको छ ।प्र’धानमन्त्री ओलीले भने कुलमानको नाममा स’हमति जनाएका छैनन् । वि’श्वस्त स्रोतका अनुसार ओलीले पटक पटक एकैजनालाई मौ’का दिन नहुने तर्क राखेका छन् । उनी कुलमानको का’र्यशैलीप्रति स’न्तुष्ट छैनन् । काम भन्दा हल्ला गरेको र सामाजिक स’ञ्जालमार्फत् सर’कारमाथि द’बाब बढाएको भन्दै प्र’धानमन्त्रीको टिम नै अ’सन्तुष्ट बनेको छ ।
२९ भाद्रबाट प्रा’धिकरणका प्र’मुख का’र्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चार वर्षीय का’र्यकाल सकिदैछ । उनी २९ भदौ २०७३ मा चार वर्षका लागि प्रा’धिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नि’युक्त भएका थिए । त्यतिबेला प्र’चण्डकै जो’डबलमा नि’युक्ति दिइएको थियो । उनले लो’डसेडिङ अ’न्त गरेको ज’स लिएका छन् । तर, यसमा भारतबाट वि’द्युत नि’र्यात हुनु एउटा का’रण बनेको छ । कुलमानले वि’द्युत चु’हावट भने रोक्ने सफलता हासिल गरेको प्रा’धिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले नै बताएका छन् । तर, लो’डसेडिङ अन्त उनको का’रणले नभएको काफ्लेको भनाई छ ।
प्रा’धिकरणमा कसलाई नियु’क्ति गर्ने भन्नेबारे प्र’धानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्र’चण्डबीच म’तभेद कायमै छ । आज बालुवाटारमा यसबारे पनि कुरा उठेको बुझिएको छ । भोलि बस्ने क्या’बिनेटमा प्र’धानमन्त्री ओलीले कुनै न कुनै नि’र्णय लिने स’म्भावना छ । कसैलाई नि’युक्ति नदिएर प्रा’धिकरणकै अर्को व्य’क्तिलाई नि’मित्त दिने स’म्भावना पनि छ । तर, कुलमानको स’म्भावना क’मजोर भएको छ ।Source ReportersclubNepal
Previous चर्चित आ’लु गायक र नायक प’ल शाह समाजसेवा गर्दै! उच्च सम्मान सहित शेयर गरौं ❣️❣️
Next अब ट्रा’यल पास गरेको सात दिनमै स्मा’र्ट लाइसेन्स…हेर्नुहोस् ।